ရင်နင့်ကြွေ(၁) — Steemit
"ငါ့သမီးရယ် ညည်းနှယ်အေ အနှိပ်သည် ပို့ခိုင်းတာ ကျော်ရွာနဲ့ တောင်ပလူ ၁၀ခေါက်တောင် ကူးလို့ရရော့မယ်”
အိမ်ထဲ ဆိုင်ကယ်ရပ်ရပ်ချင်း မိခင်ဖြစ်သူ ပြောစကားကြောင့် ဋ္ဌေးဋ္ဌေးဦး တစ်ယောက်မျက်နှာညိုလျှက်နှင့်...
"အမေကလဲတော် အမေယူခိုင်းလိုက်တဲ့ ဖုန်းနံပတ် စောင့်နေရတာ အမေမယုံ အနှိပ်သည် ဖုန်းဆက်မေးပါလား” ဟု ခွန်းတုံ့ပြန်လေသည်။
ဒေါ်မိုးမိုး တစ်ယောက် တောင်ပလူရွာက အနင်းအနှိပ်သည် ခေါ်ပြီး အနင်းခံပြီးနောက် သမီးဖြစ်သူအား တောင်ပလူရွာသို့ ပြန်လိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်ခြင်းပင်။ တောင်ပလူရွာနှင့် မိမိရွာဖြစ်သော ကျော်ရွာနှင့် ဆိုင်ကယ် ၁၀မိနစ်ခန့် မောင်းရုံနှင့် ရောက်နိုင်သည်။ ညနေ ၆နာရီခန့်က ပို့ခိုင်းလိုက်ရာ သမီးဖြစ်သူ ၇နာရီကျော် ခါမ ပြန်ရောက်လာသောကြောင့် ငေါက် မိခြင်းပင်။
ဒေါ်မိုးတွင် သမီးတစ်ယောက်နှင့် သားတစ်ယောက် သာရှိလေသည်။ သမီးကြီးက ခုမှ အသက်၂၀နှင့် သားလေးက ၁၀နှစ် ၄တန်း ကျောင်းသား ။ သမီးကြီးသည် ၆တန်းရောက်သောအခါ မိမိတို့ မိသားစု စီးပွားရေး မပြေလည်လှသဖြင့် ကျောင်းမှထွက်ခါ မြေဖြူစက်တွင် အလုပ်လုပ်ရှာသည်။ ရသမျှလစာ မိခင်အား အကုန်အပ်လေ့ရှိသည်။
သို့သော် သူမတွင် မကောင်းသည့် အကျင့်က အရွယ်လေးရောက်လာသည်နှင့် ရည်းစား ထါးလိုခြင်းပင်။ မိမိအလုပ်လုပ်သည်က အထည်ချုက်စက်ရုံ တွင်ဖြစ်ပြီး မနက်ဆိုင်း ညဆိုင်း ဆင်းရသည်။ သမီးဖြစ်သူက မနက်၇နာရီခန့် အလုပ်သွား၍ ညနေ ၅နာရီခန့်ဆို အိမ်ပြန်ရောက်ပြီ။ သမီးတို့အလုပ်က ဥပုပ်နားသည်။ မိမိက စနေ တနင်္ဂနွေ နားသည်။ မိမိ အလုပ်ဆင်းရက် သူမ ဥပုပ် နေ့ကျ၍ အိမ်မာကျန်ခဲ့လျှင် မိမိမာ အလုပ်တွင် စိတ်မဖြောင့် သမီးဖြစ်သူထံ စိတ်တထင့်ထင့်ဖြင့် ဖုန်း မကြာခဏ ဆက်ရသည်။ မိမိတွင် သမီးလေးတစ်ယောက်သာ ရှိသဖြင့်လဲ စိတ်ပူမိလေသည်။
ဌေးဌေးဦး သည် ရုက်ရည် ချောလှသည့်ထဲ မပါစေကာမူ ညိုညိုလုံးလုံးလေးနှင့် ကြည့်ပျော်ရူပျော်ရှိလေသည်။ ဒေါ်မိုးမိုး အတွေးက လွန်ခဲ့သည့် သူမသမီး ၁၇နှစ်ကျော်လောက်သာ ရှိအုံးမည့်အချိန်သို့ ပြန်ပြောင်း တွေးမိလေသောအခါ မှတ်မျတ်ရရ သမီး ၁၇ကျော်ပီးတာ သိပ်မကြာသေးသော တချိန်က တစ်ခုသော ညနေဘက်တစ်ရက်တွင် ဌေးဌေးဦးမှ
"အမေ ကျုပ်ကို မနက်ဖြန်ကျရင် လာတောင်းမယ်တဲ့”
"ဟေ ငါ့သမီး ဘယ်သူက တောင်းမာတုံး”
" ဟော်တော် ငါ့သမီးရယ် ညည်းငယ်ပါသေးတယ်အေ မယူပါနဲ့အုံး”
မိမိပြောသော်လည်း သူမက စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပုံပင်။
ကဲ ရှိစေတော့ မိမိဇွတ်အတင်း ပြောလို့ ခိုးပြေးရင်လဲ မိမိက သမီးရှင်မို့ မိအေး နှစ်ခါနာရအုံးမည် ။ မောင်မောင်ခေါ်တုံး ဗျာထူးတာ ကောင်းပါလိမ့်မည် ဟု တွက်မိ၍ သမီး ယူမဲ့သူအား ဘယ်က အသက်ဘယ်လောက် သူ့မိဘတွေကြောင်း မေးမြန်းရာ သားမက်ဖြစ်လာမည့် သူသည် အသက်၂၀ခန့်သာ ရှိသေးကြောင်း အထက်ဟုခေါ်သော ယခု မိမိတို့်နေသောအရပ်နှင့် အလွန်ဝေးသောနေရာမှ အလုပ်လာလုပ်သူဖြစ်ကြောင်း မနက်ဖြန်တွင် သူ့မိဘများ မပါလာနိုင်သေး သူ့အလုပ်မှ အလုပ်ရှင်လူကြီးများနှင့် လာတောင်းရမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်မသက်သာစွာ ကြားရလေတော့သည်။ တစ်မိပေါက် တစ်ယောက်ထွန်းများ ဖြစ်လေပြီလားဟု ငိုရင်း သက်ပြင်း ချမိလေတော့သည်။
#novel #sad #life #really
အယ်လဲ့ ရေးနေတာ လည်ထွက်နေတာ ကိုအေးရေ..နောက်အပိုင်းတွေ သည်းခံဖတ်ပေးပါအုံး😊
ကသက် ကို အမြဲ အားကျခဲ့ရသူပါလို့😊
၁၇ နှစ်တုန်းက လာတောင်းမယ့်သူနှင့် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး
အသက် ၂၀ ရောက်လာပါလိမ့်....စိတ်ဝင်စားလာပြီ😁😁😁
နဲနဲလည်သွားလား အဟိ😁😁တေချာဖတ်အေ အသက်၂၀က ခု ဟို၁၇နှစ်တုံးကဟာက ပြန်စဉ်းစားတာလေအေ😁
အေးပါအေ တကယ် ရင်နာစရာ ဆက်ဖတ်ပေးအူးနော်😟
thithisann (49)3years ago
စမ်းရေးထားတာ ညီမ ကျေးဇူးပါ😍
မာင်မောင်ခေါ်တုံး " ရှင် " လို့ ထူးရမှာ ဟုတ်ဘူးလား...? ဘယ်နှယ့် " ဗျာ " ထူးရမယ်လို့...
ဂျာ အဟီး😁😁 ဟုတ်လားဟင်
မမ လှလှ ချချ
မမစုတို့ မမကြည်တို့ကို အားကျတယ်ဗျို့ စာရေးတာ ပြောပါတယ်..လိုက်ကိုမမှီဘူး
အယ်လယ့် အမြှောက်က သိပ်မကြိုက်တာနဲ့
တကယ်ပါဆရာ သမီးကြီး ထီးပဲ ဖြစ်စေချင်တာပါ မီးလို့ မဖြစ်စေချငိပါဘူး😔
ခုလို အားပေးတော့ ပျော်ဘီလေ😍
အဖွင့်‌‌လေးကကို ဆွဲ‌ဆောင်‌မှုရှိတယ်‌ဗျ။ဝတ္ထုမှာ အခက်‌ဆုံးက နိဒါန်းဘဲ။မယ်‌ကြည်‌က မ‌ရေးလို့ပါ ။သရုပ်‌‌ပေါ်လွင်‌ပါတယ်‌။ဘာကို ဦးတည်‌မလဲ ဆိုတာကို ‌စောင့်‌‌မျှော်‌‌နေမယ်‌ ‌နော်‌။
ဟုတ် လည်တယ် လည်တယ် ရေးနေဆဲ😌
စမ်းရေးကြည့်နေဘီ ကောင်းသညိဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ အားပေးနော်😊
သီးချိန်တန် တာမှန်ပေမယ့် စောပီးသီးနေလို့နှမြောမိတာပေါ့လေ
ဟုတ်တယ် အကိုစိုး😌ခုလို ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ
မယ်ကြည့်ကို ကြည့်နေတာ ဘူနဲ့ တူလဲလို့ အခုမှ အဖြေရတယ်အေ စိုးမြတ်နန္ဒာနဲ့ ဆင်တာကိုး
အယ်လဲ့ မတ်မတ်စုက ပိုချောနေပါတယ်လေ😍😍
nweoomon (51)3years ago
တကယ် ရင်မောစရာပါ ညီမရေ😔
မမကြည် ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတွေ ရေးနေပြီပေါ့နော်
ကြိုက်တယ်ဗျ ဖတ်ရတာ မအီဘူး Good
မမ ဌာနထဲက အန်တီကြီးနဲ့ သူ့သမီးလေးရယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ မောင်လေး 😞
Congratulations @kyi! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
အော် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကလေးမရယ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ် မသိနိုင်တော့ဘူးနော်။
Congratulations @kyi ! You receiveda1.93% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 100 SUP Today.
Nice post. Kryptonia ID at blogjeremiah